Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » Ny Air Tanzania dia mifidy ADSoftware hitantana ny andian-tsambony
Nanomboka ny fampiharana ny vahaolana ADSoftware hitantanana ny andian-tafiky ny Bombardier Q400, Boeing 787 Dreamliner ary ilay A220 vaovao (fantatra amin'ny anarana hoe CS300) ny mpitantana saina Tanzaniana.
Ny hetsika dia ampahany amin'ny fanavaozana ny fizotran'ny fikolokoloana ny mpandraharaha ary hanamora ny fiezahana hanatsara ny asa. Ny sambo dia iray amin'ireo vaovao farany eto amin'ny kaontinanta afrikanina, ny Air Tanzania no mpandraharaha afrikanina voalohany ary zotram-piaramanidina dimy manerantany nahazo ny A220.
Miaraka amin'ireo fanovana ireo dia nila mpiara-miasa matanjaka ho an'ny rafitry ny fampahalalana momba ny Maintenance ny mpandraharaha. Ny dingam-pifidianana feno dia nanjary nisafidy ny vahaolana ADSoftware, Airpack. Ny tombony lehibe dia ny setroka feno amin'ireo fampiasa natolotra, ny fahamoram-panahin'ny mpampiasa ilay rindrambaiko ary ny serivisy fanatanterahana namboarina niaraka tamina manam-pahaizana momba ny angon-drakitra fiaramanidina nalefa teny an-toerana fotoana fohy taorian'ny sonian'ny fifanarahana.